UMinnie ubhoboka ngezinkinga ezimkhungethe
Bongiwe Zuma | February 26, 2022
USAZIWAYO uthuse abaningi ememezela ngesehlukaniso nomnyeni wakhe abeseshade naye iminyaka emine, uMinnie Dlamini. Uphinde wamangaza abaningi eveza ukuthi naye ubengakwenza okwenziwe ngumrepha, uRicky Rick, okuthiwe uzibulele kuleli sonto.
UMinnie uthe isimo akusona ngokomphefumulo, simazonzo kakhulu.
"Ngeke ngiqambe amanga, ngiphukile emoyeni. Lezi zindaba bezingaba ngami," kusho uMinnie.
Lokhu kwephule umoya abalandeli bakhe bakubona njengendlela yokucela usizo ngoba ubeveza ukuthi akukho okuhamba kahle. UMinnie ungomunye wosaziwayo besifazane, abahlala benameka izithombe ezinkundleni zokuxhumana futhi ungafunga ukuthi akanazo izinkinga.
Uphumela obala nje, ngokungaphatheki kahle kwakhe, muva nje uphenduke inhlekisa ezinkindleni zokuxhumana uMinnie ngokungaphatheki kahle kwakhe, emuva kokuthi ephenduke ihlaya ngokuphela komshado wakhe.
Abanye abantu basola amabhoklolo akanise kwiTwitter ngokuba nesandla ekutheni osaziwayo bazithole benengcindezi baze bafise nokuzibulala.
"Selokhu ngabukela ivideo kaMac G, ngakuyeka ukuhlukumeza abantu kwiTwitter," kusho uMthembo, ekhuluma ngevideo eyayigqugquzela abantu bakwiTwitter ukuthi babambisane benze okuhle kunokuthi badicilelane phansi.
" Ngiyavuma, ngike ngahleka amahlaya abenziwa ngedivosi yakho. Ngakhohlwa ukuthi ungumuntu noma kungathiwa kubhekiswa ngakimi, ngeke ngakuthanda. Ngikhulekela ukuthi kusheshe kudlule nakwabanye abaphukile emoyeni," kusho uThabiso Moyo.
UMINNIE Dlamini, uveza ukuthi yize kubukeka sengathi konke kuhamba kahle kodwa uphukile emoyeni Isithombe: INSTAGRAM